မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဝတ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ရန်အကြံပြုချက်များ ၈ ခု။ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ကားလို့စ် Rivera | | ပုံ, သဘောထားတွေ
များစွာသောလူများအတွက်နေ့စဉ်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုသည်နေ့စဉ်လုပ်သောအလုပ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားသူများအတွက်မူ၎င်းသည်အထူးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုအတွက်ရံဖန်ရံခါဝတ်စားဆင်ယင်မှုသာဖြစ်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါတို့ရှိသမျှသည်ကဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ရန်ကြွလာသောအခါစုံလင်ခြင်းရှိလိုကြသည်.
ကောင်းပြီ၊ လူတိုင်းအတွက်ဒီအထူးတီထွင်မှုကိုတီထွင်ခဲ့တယ်။ ဒီပုံစံကစတိုင်လမ်းညွှန်ချက်ရှစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးဝတ်စုံဝတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့မကျော်နိုင်တဲ့ 'စည်းကမ်းတွေ' ။ ရှစ် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော sartorial စတိုင်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ခြားနားမှုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သံသယမရှိဘဲ, အဓိပ္ပါယ်ချုပ်ချုပ် decalogue ။
6 ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - ရုံနှင့်လိုအပ်သော
တခုတည်းသော တော်အောင်ပြုပြင်ခြင်း သင့်လျော်သော
Mango Man ပုံမှန်ဝတ်စုံဝတ်စုံ
ဝတ်စားဆင်ယင်သည့်အခါသင်ပထမ ဦး ဆုံးစဉ်းစားသင့်သည်။ ငါ့ကိုအများဆုံးကိုက်ညီတဲ့ဖြတ်ကဘာလဲ၊ ဒါကဘာလဲ လျောက်ပတ် ကျွန်တော်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးပဲ ဂဏန်း။ ငါတို့ခွဲနိုင်တယ် fittings ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားလုပ်ကွက်သုံးခုအတွက်: ပုံမှန်မထိုက်မတန် သို့မဟုတ်ဂန္တီးဖြတ် ပါးလွှာမထိုက်မတန် သို့မဟုတ်တပ်ဆင် silhouette ဖြတ်နောက်ဆုံးတော့ skinny မထိုက်မတန် သို့မဟုတ်အလွန်တင်းကျပ်စွာဖြတ်။ ကောင်းကောင်းဝတ်စားဆင်ယင်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ခဲ့သည် သူတို့ကိုအသေးစိတ်အဓိကဖြတ်တောက်မှု၏ပြန်လည်သုံးသပ်။ သင်ရွေးလျှင် တော်အောင်ပြုပြင်ခြင်း သင်ပြီးသားအလုပ်၏ထက်ဝက်ရှိသည်စံပြ။
ကျွန်ုပ်ဂျာကင်အင်္ကျီသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကိုက်ညီလျှင်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။ ဝတ်စုံအကျီတွင်အရေးကြီးဆုံးမှာပခုံးဖြစ်သည်။ သူတို့ကကပ်လိုက်ရင်အရွယ်အစားနည်းနည်းလိုတယ်။ ဝတ်စုံ၏ပခုံး pad သည်သဘာဝပခုံးပေါ်ကျလိမ့်မည် ထို့အပြင်၎င်းသည်အလွန်အမင်းမထွက်လာဘဲအထက်တွင်သာရှိရမည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည်ခလုတ်ကိုပြtheနာမရှိဘဲစွဲစေနိုင်သည်။
မသန်စွမ်း ဘောင်းဘီမှန်ကန်သောအရာ ဖိနပ်ပေါ်မှာသူတို့ကိုကြိုးစားတဲ့အခါသူတို့ကတစ်ခုတည်းခြံလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်မှန်ပါသည်၊ သို့သော်မကြာသေးမီကဖိနပ်နှင့်အလွန်နီးကပ်ပြီးဖိနပ်နှင့်အတူစီးဆင်းနေသော ၀ တ်စုံများသည်ဖက်ရှင်ကျလာသည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိအချိန်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာသည်ဘောင်းဘီအရှည်တိုင်းတာမှုများအားပုံမှန်အားဖြင့် R၊ နှင့် L ကိုအရှည်ဆုံးတိုင်းတာခြင်းအဖြစ်။ ထို့ကြောင့်ဥပမာအားဖြင့် ၇၀ ကီလိုဂရမ်ခန့်ရှိပြီးအမြင့် ၁၇၀ စင်တီမီတာရှိသောယောက်ျားတစ်ယောက်သည်အရွယ်အစား ၄၀R ဘောင်းဘီကိုဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သူသည်အမြင့် ၇၅ ကီလိုဂရမ်ခန့် ၁၈၅ စင်တီမီတာခန့်သာရှိလျှင် 70L ဝတ်ဆင်လိမ့်မည်။
ဒီအညစ်အကြေးတွေရှိနေပေမယ့်အထည်အလိပ်ကိုသူတို့တိုင်းတာတဲ့အတိုင်းအတာအတွက်အသင့်တော်ဆုံးအရှည်ကိုမတွေ့နိုင်ရင်အဝတ်အစားလဲဖို့လိုကောင်းလိုလိမ့်မယ်။ ဘောင်းဘီ၏အောက်ဆုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏တိကျသောတိုင်းတာမှုနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေခြင်းဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင့်ကိုကောင်းမွန်စေသည် သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုချေးခဲ့ကြသကဲ့သို့မ။
၀ တ်စုံအကျီင်္ကိုဘယ်လိုတပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသတိပေးတဲ့နည်းဥပဒေတစ်ခုရှိပါတယ်။ ခလုတ်သုံးခုပါသည့်ဂျက်ကတ်တွင်အမြင့်ဆုံး၊ တစ်ခါတစ်ရံအလယ်နှင့်အနိမ့်ဆုံးကိုအမြဲတပ်ရမည်။ ယနေ့လူကြိုက်အများဆုံးဝတ်စုံများသည်ခလုတ်နှစ်ခုသာဖြစ်သော်လည်း၊ ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းထိပ်ဆုံးတစ်ခုကိုပိတ်ပြီးအောက်ခြေကိုပွင့်လင်းစွာထားလိမ့်မည်။ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် တစ်ခုတည်း button ကိုအကျီ - အများအားဖြင့်အများဆုံးခေတ်သစ်နှင့်ဖြတ်ဝတ်စုံအတွက်ပေါ်ပေါက်သော skinny မထိုက်မတန် - ကျန်သေးသည် အမြဲတမ်းပိတ်ထားကျနော်တို့ထိုင်ဖို့မဟုတ်လျှင်, လာမည့်အချက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏
ထိုင်တဲ့အခါအရေးကြီးတယ် ဂျာကင်အင်္ကျီပေါ်ရှိခလုတ်များအားလုံးကိုပယ်ဖျက်ကြပါစို့ ငါတို့ထင်လျှင်ငါတို့သည်သူတို့၌၎င်း၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့်, သင်ကိုက်ညီတဲ့အင်္ကျီနှင့်အတူဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်လျှင်, တူညီတဲ့၏ခလုတ်အမြဲအားလုံးစွဲစေဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ထိုင်နေလား၊ ရပ်နေသည်ဖြစ်စေဒီပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း။ ဒီသေးငယ်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကဝတ်စုံကိုဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာသိတဲ့လူနဲ့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အသုံးမပြုတဲ့လူနဲ့ခြားနားတာကိုလုပ်တယ်။
ရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်လုံးမဖြည်သင့်သလို၊ ရှပ်အင်္ကျီသည်အနည်းဆုံးလက်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုထုတ်ပေးသင့်သည်စင်တီမီတာ၏စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကဂျာကင်အင်္ကျီလက်အရှည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရွယ်အစားနှင့်သင့်လျော်ကြောင်းညွှန်ပြလိမ့်မည်။
လက်ရှိတွင် တူညီသောဂျာကင်အင်္ကျီအရွယ်အစားတွင်၊ အမှတ်တံဆိပ်များစွာသည်အရွယ်အစားနှစ်မျိုး (သို့) ၃ ပင်ရှိသည်။ ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျာကင်အင်္ကျီအရွယ်သည် 48S ဖြစ်ပါက၎င်းသည်ဤအရွယ်အစားအတွင်းအတိုဆုံးဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ နောက်အရွယ်အစားမှာ ၄၈R ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်သို့မဟုတ်ပုံမှန်အရှည်ကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်၊ နောက်ဆုံးတွင် ၄၈ လီသည်အရွယ်အစားဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလိမ့်မည်။ အားလုံး 48 ၏ရှည်လျားသော။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - ရုံနှင့်လိုအပ်သော
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်အလွန်မျှတပြီးတိကျမှန်ကန်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဝတ်စုံ ၀ တ်ဆင်သည့်အခါများသောအားဖြင့်နည်းပါသည်။ လည်စည်း၊ လေးနှင့်လက်ကိုင်ပုဝါအပြင်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများလည်းရှိသည် ရင်ထိုးတံသင်, ချည်ညှပ်, ဒါမှမဟုတ် cufflinks။ ဤအပိုပစ္စည်းများနှင့်အတူသင်အများကြီးအားသွင်းနိုင်သကဲ့သို့သတိထားရကြမည် ကြည့်ရှု ပြီးတော့သူတို့ကိုသုံးရင်ပိုကောင်းတယ် သမ္မာသတိ ရှိ၍ ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းများကိုရွေးချယ်ပါ - ကြီးမားသောနှင့် Baroque ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ostentatious ဖြစ်ခြင်း၏အစား - ဤလိုင်းများကိုအောက်တွင်ပြသသောသူများကဲ့သို့။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ထူးခြားသောလည်စည်း၊ ရင်ထိုးလက်ကိုင်ပဝါကိုရွေးပါက၎င်းကိုဝတ်ဆင်ပါက၎င်းသည်ကြားနေလေသံနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ရန်ပိုမိုအကြံပြုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်အလွန်လှသော cufflinks ရှေးခယျြခဲ့လျှင်, တစ် ဦး လည်စည်းဘားသို့မဟုတ်တစ် lapel pin ကို၏အသုံးပြုမှုကိုကျဆင်း။ ယုတ်အတွက်အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ မျှတသောချိန်ခွင်ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားပါကအပိုပစ္စည်းများကဝတ်စုံကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ပါ ဒါပေမယ့်တိုးမြှင့်။ သံသယဖြစ်လျှင်, ကောင်းတစ် ဦး လည်စည်းကိုရွေးချယ်နှင့်ကြွင်းသောအရာအကြောင်းကိုမေ့လျော့။
အရောင်နှင့်ကိုက်ညီရန်ဖိနပ်ကိုက်ညီခြင်း ၎င်းသည်အရေးကြီးဆုံးအချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်တကယ့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူတိုင်းရှိသင့်သည့်အခြေခံအကျဆုံးဝတ်စုံများနှင့်အတူဖြစ်နိုင်သမျှဖိနပ်ပေါင်းစပ်မှုများကိုတင်ပြသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်အနက်ရောင်ရှိဝတ်စုံများအတွက်ကိုက်ညီသောဖိနပ်များသာအနက်ရောင်ဖြင့်ကြည့်ကောင်းသည်။ အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်အညိုရောင်ရှိဖိနပ်များသည်ကောင်းမွန်စွာစီးဆင်းသည်။ ၎င်းသည်အလယ်အလတ်မီးခိုးရောင်ဝတ်စုံများတွင်အနက်ရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အညိုရောင်၊ အညိုရောင်သို့မဟုတ်ကုလားအုတ်နှင့်အညိုရောင်များဖြင့်ဖိနပ်များကိုဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ အပြာရင့်ရောင်ဝတ်စုံများ၊ အနက်ရောင်၊ အညိုရောင်၊ အညိုရောင်၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ မြေကြီးတုန်ခါခြင်းအတွက်ဝတ်စုံများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အညိုရောင်၊ အညိုသို့မဟုတ်အပြာရင့်ဖိနပ်များကိုလောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ခါးပတ်နှင့်ပတ်သက်။ , သေချာအောင်လုပ်ဖို့၊ ကဖိနပ်၏တူညီသောအရောင်နှင့်အတူကပေါင်းစပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကြယ်သော၊ ပွတ်တိုက်ပြီးတောက်ပသောဖိနပ်သည်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားသင့်ရဲ့အလုံးစုံအမြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည် ကြည့်ရှု သူတို့ကောင်းသောအခွအေနေ၌မပါလျှင်။ မင်းအဝတ်အစားမဝတ်ခင်၊ သင်၏ဖိနပ်များကိုအရောင်တင်ရန်သို့မဟုတ်ဟောင်းနွမ်းပါကဇာများကိုပြောင်းလဲရန်မမေ့ပါနှင့်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, စစ်ဆေးပါ လည်စည်း၏ထုံးကိုကောင်းစွာပြုသောအမှုနှင့်လည်စည်းဗဟိုပြုကြောင်း ညာဘက်တစ်ခုလုံးကိုခလုတ်ကိုဖုံးအုပ်သောရှပ်အင်္ကျီ၏ဗဟို၌တည်၏။
အိုးအရမ်းအရေးကြီးတယ်! သငျသညျအားလုံးစက်ရုံချုပ်ရိုးဖယ်ရှားပစ်ကြပြီသေချာပါစေ နှင့်ဂျာကင်အင်္ကျီ၏နောက်ကျောအပေါ်အဖွင့်ပိတ်ဖို့ရန်အစေခံ။ ၎င်းသည်သိသာထင်ရှားပုံရသည်။ သို့သော်ဝတ်စုံများကိုဝတ်လေ့မရှိသောဤအပ်ချုပ်များသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြုလုပ်သောယောက်ျားများရှိသည်။ သင်သိသည်နှင့်အမျှသူတို့ကစတိုးဆိုင်သို့ရောက်သောအခါအဝတ်အစားများကိုပုံပျက်မသွားအောင်ပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်သင့်အား ၀ တ်စားဆင်ယင်ပုံကဲ့သို့ဖြစ်စေနိုင်သည်၊ ဆန့်ကျင်ဖက်တွင် ၀ တ်စုံတွင်မည်သို့ ၀ တ်စားဆင်ယင်ရမည်ကိုမသိသောစူပါစတားကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များအပြင် သဘောထားကအရမ်းအရေးကြီးတယ်၊ဖြောင့်ဖြောင့်သောအနေအထားဖြင့်ဖြောင့်မတ်သောကိုယ်ဟန်အနေအထားဖြင့်လျှောက်လှမ်းခြင်းသည်သင်၏ဝတ်စုံကိုလှပတင့်တယ်စေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » တစ် ဦး ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ဘို့ 8 စတိုင်လမ်းညွှန်ချက်များ
တိုတောင်းသောဆံပင်ပုံစံများ - အသွင်အပြင်တစ်ခုစီကိုဘယ်လိုရနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသင်ပြပေးပါ